N’ọkara nke mbụ nke afọ ahụ, China mepụtara batrị lithium-ion dị ijeri 7.15 ijeri na igwe eletriki igwe nde 11.701.
Site na Jenụwarị ruo June 2020, n’etiti ngwaahịa ndị na-arụpụta ụlọ ọrụ batrị na China, mmepụta nke batrị lithium-ion bụ ijeri 7,15, yana mmụba nke afọ ọ bụla nke 1.3%; mmepụta nke igwe eletrik bụ nde 11.701, yana mmụba kwa afọ nke 10.3%. Dabere na anyị ...
Na nkeji nke abụọ nke 2020, ngụkọta mbubata mbubata nke cobalt raw ngwaọrụ bụ tọn 16800, yana mbelata afọ na 19%. N'ime ha, ngụkọta nke cobalt ore bụ tọn 0100 nke ụda ọla, na mbelata afọ nke 92%; ngụkọta ibubata nke ngwaahịa na nke coba ...
Batrị Lithium enwetala ngbanwe nke batrị nickel cadmium wee banye batrị nickel hydrogen. Site n'ọnọdụ nke ahịa n'ọtụtụ, zuru ụwa ọnụ ahịa ọnụ ọgụgụ nke lithium batrị maka ike ngwaọrụ ga-eru 9.310 ijeri yuan na 2019, na ahịa n'ọtụtụ nke lithium batrị maka ike ...
Ka ọnwa nke iri abụọ na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asatọ n’afọ 2018, n’okpuru nhazi nke ngalaba nchịkwa mmadụ, ụfọdụ ndị ọrụ nke TRUE POWER gbara ụgbọ ala ruo otu elekere na ntọala mmepe ụlọ nkwari akụ Jinsha bay, wee bido ọzụzụ mmepe otu ụbọchị. Onye obula ji obi uto ma chia ochi ma ikuku di elu. Ebumnuche nke ex ...
Na October 12, 2019, Hong Kong Ngosipụta Electronic nke akụnụba ụwa kwadoro ka emere na Asia International Expo na Hong Kong. EZI Ike ka a sonye na ihe ngosi a, ụlọ ntu Mba. 5c-b33, anyị gosipụtara batrị lithium-ion, batrị polymer, batrị nickel an ...
N'ihe banyere mmepe mmepe nke ugbo ala ohuru, erere ugbo ala elekere nde 2.2 n'uwa dum na 2019, mmụba nke 14.5% kwa afọ, na-echekwa 2.5% nke ire ere ụgbọ ala. Ka ọ dị ugbu a, n'ihe gbasara ire ahịa ụgbọ ala ọhụrụ, BYD bụ nke abụọ nke Tesla. N'ime afọ 19 ...
3.7 Batrị na-akwụ ụgwọ, Li Batrị, Batrị Lithium Ion Polymer, 18650 Nimh, 12 Volt Rechargeable Lithium Batrị Pack, 12v Lithium Ion Batrị na-akwụ ụgwọ, Ngwa niile